Ezintsha | Ucanzibe 2022
I-10 NgokuSimahla yokuGqibela ukuKhangela ukuKhangela kweFowuni ngegama (Akukho Ntlawulo)
Udidi Ezintsha 2022
Ngokukhangela inombolo yasimahla yenombolo, unokufumana iinkcukacha ezifanelekileyo malunga nomnini wefowuni. Ngaba ubizwa ngumnxeba ngefowuni okanye ngaba ngumsebenzi osemthethweni wokubuza? Ungafumanisa ngemizuzwana ngokufaka inombolo kwiinjini yokukhangela inombolo yasimahla kwenye yeenjini zokukhangela ezikhethiweyo zabantu abali-10.
Yeyiphi eyona oyile ye-CBD ilungileyo yokujongana neentlobo ezahlukeneyo zentlungu? Usebenzisa njani i-oyile ye-CBD yeentlungu xa ithelekiswa namayeza emveli? Fumanisa oku nangaphezulu kwisikhokelo sethu sokuthenga sokugqibela.
I-1,400 ye-Stimulus Checks: Uyilindele nini iNtlawulo kwaye ubale ukuba uza kufumana malini
Olu tshekhi lwe-1,400 lokukhuthaza lusondele kwikona njengoko iCongress idlulisa uMongameli uJoe Biden's $ 1.9 trillion 'American Rescue Plan.' Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana.
UGoogle utyhila eyona Mibuzo icinezelweyo eMelika kunye nokuKhangela okuDumileyo kwe2018
Ingxelo kaGoogle 'yoNyaka wokuKhangela' ka-2018-uluhlu olubanzi lwezona zopolitiko zikhangelwe, abalingisi, iimvumi, iimbaleki, imicimbi yeendaba kunye nemibuzo e-US kwi-2018, ngokweGoogle-ikhutshwe yingxilimbela ngoLwesithathu.
Eyona oli ye-CBD yeeNja- iiMveliso eziPhezulu ze-2021
Ngaba ujonge ioyile efanelekileyo ye-CBD yezinja? Siza kuxoxa ngezinye zeoyile zethu ze-CBD esizithandayo zee-canines kwaye sibandakanye ulwazi oluncinci malunga nokuba ujonge ntoni ngexesha lokuthenga.
Ikhaya Elisisigxina likaElon Musk yiBhokisi yeedola ezingama-50 000-Jonga ngaphakathi
Ikhaya elitsha eliphambili lika-Elon Musk kuthiwa li- $ 50,000 yemodyuli encinci eyenziwe yiBoxabl eBoca Chica, eTexas kufutshane nendawo yovavanyo ye-SpaceX.
Ileta yokurhoxa yomhleli wezimvo ze-NYT kunye nomlobi wemihlathi u-Bari Weiss ileta emalunga nokuthetha ngokukhululekileyo. Ngokwenene imalunga nokuchasana.
Indlela yokujongana neNarcissist: Iimfihlo ezi-5 ezixhaswa nguPhando
Okokugqibela, imfihlo yendlela yokujongana nabantu be-me-me-me.
Sizamile ifaskoti eblue, Molo oMtsha kunye nabakhuphisanayo abane-enye yayicacile ukuba yayiyeyona ibalaseleyo
Sizamile iinkonzo zokuhambisa iresiphi iBlue Apron, Molo oMtsha, uMpheki weKhaya, oChongiweyo, Isitya sepesika kunye neParrot ebomvu, ezibonelela ngezithako esele zabelwe.
Kutheni uElon Musk kunye nezinye iiTeknoloji zeBhiliyoni beShiya iSilicon Valley eTexas
I-Tesla kunye ne-CEO ye-SpaceX u-Elon Musk yibhilionea yakutshanje yeSilicon Valley yokufudukela isigxina eTexas, indawo entsha yobuchwephesha besizwe.
U-Elon Musk utyhola i-FAA emva kwe-SpaceX Scrubs Falcon 9 Mission kwi-Second Second
I-SpaceX kuye kwafuneka ikhuhle i-Falcon 9 i-satellite yokuhambisa kwakhona i-satellite ngolwe-Lwesibini ngenxa yokuxinana kwetrafikhi ngomzuzu wokugqibela. U-Elon Musk usola isiganeko kwi-FAA.
I-Coinbase iya kuluntu: Ngaba sisiqalo sesiphelo seBitcoin?
Ukutshintshiselana nge-Crypto Coinbase kulungiselelwe ukuba kwenziwe esidlangalaleni ngoLwesithathu kwi-Nasdaq ngokusebenzisa uluhlu oluthe ngqo. Isiqalo sentengiso sisihlandlo sembali.
IAmazon Inokhetho lweNyukliya ngokuchasene neWalmart kunye nabanye abakhuphisana nabo
Ukusuka kwinqanaba lokujonga, iAmazon ukufumana i-US Postal Service iya kuba lelona nyathelo likhulu leAmazon elinokuthi lenze ithuba lokufumana ukhuphiswano olungenakoyiswa nanjengoko inxulumene nolungiselelo kunye nokuhanjiswa kweemayile zokugqibela.
Eyona oyile ye-CBD ilungileyo yokuxhalaba: Izibonelelo kunye neeBhanti eziPhambili zowama-2021
Amawakawaka abantu basebenzisa ioyile ye-CBD ukulwa uxinzelelo kunye noxinzelelo. Ukuba ukhangele eyona oyile ye-CBD ilungileyo yokunciphisa iimpawu zakho, esi sikhokelo sesakho.
Uyenza njani iMvelaphi yokuSimahla Jonga kwi-Intanethi
Uyenza njani imvelaphi yokujonga simahla: jonga iirekhodi zoluntu, imbali yolwaphulo-mthetho, iinombolo zokhuseleko loluntu, iirekhodi zenkundla, imithombo yeendaba zentlalo, iirekhodi zomtshato noqhawulo-mtshato nokunye okuninzi! IMVELAPHI YOKUHLAWULWA KWENKQUBO 2021
U-Elon Musk utyhola u-Facebook kunye noMark Zuckerberg ngeCapitol Riot
Emva kwembambano yango-Lwesithathu ye-pro-Trump e-DC, u-CEO we-Tesla u-Elon Musk wathumela umyalezo nge-imeyile esithi u-Facebook yayikukuqala kolu ngquzulwano lwasendle.
Umfazi kaJeff Bezos owayengumfazi uMacKenzie Scott Unikele nge-8 yezigidigidi zeedola ukusukela nge2020
Umfazi wangaphambili kaJeff Bezos, uMacKenzie Scott, unikele nge-8.5 yezigidigidi zeedola kwimibutho ephantse ibe yi-400 ukusukela nge-2020, kubandakanya ne-2.7 yezigidi zeedola ezibhengezwe ngoLwesibini.
I-11 yezona ziQinisekiso zoBunjani boMntu oMhlophe weSizwe UkuBethwa ebusweni
Abasebenzisi abaninzi bongeze umculo wangasemva ngalo mzuzu ubuzwe obumhlophe obathi baqulunqa igama elithi 'alt-ekunene' babethwa ebusweni.
Impendulo kaLady Gaga kwiiCyberbullies ngumzekelo ofanelekileyo ukulandela
U-Lauren Bohn, omnye wabalingane afunda nabo kwi-NYU kaGaga, utyhile i-vitriol ekwi-intanethi, kunye nendlela uGaga abathulise ngayo abo bazondayo, kwi-Facebook.
I-Walt Disney yeNkampani yokuFumana ngokuMkhulu, ibekwe ngokweNdleko
I-Disney iyeyona nkampani yemidiya enoburharha xa kusenziwa ukufunyanwa kwe-blockbuster kule minyaka ili-16 idlulileyo.
Abahlaziyi babemthiyile uBeyonce, kodwa abalandeli bakhe bayayivala ngokukhawuleza
'UHamilton' waphinde wayivuselela njani i-Charity yaBantwana eneminyaka engama-210
Zonke iiprojekthi ezingama-52 zeDisney zibhengezwe kuSuku lwaBatyali mali
Isobho senkukhu kunye noGina Gershon
Ngubani upeter gregory osekwe
ezona mveliso zokukhula kweenwele
ufika nini umntu we-irishman kwi-netflix
ujerry lewis uyaphila okanye ufile
jonga inombolo yefowuni mahala